मुटुलाई कमजोर पार्ने पल्मोनरी हाइपरटेन्सन कस्तो रोग ? - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ टिप्स ∕ मुटुलाई कमजोर पार्ने पल्मोनरी हाइपरटेन्सन कस्तो रोग ?
हेल्थ आवाज शुक्रबार, २०७९ वैशाख २३ गते, १२:०७ मा प्रकाशित
फोक्सोमा रगत पुर्‍याउने रक्तनलीहरूमा रक्तचाप बढेर मुटुलाई कडा काम गर्न दवाव दिन थाल्ने हुँदा मुटुको आकार ठूलो हुने र मुटुको दाहिने भाग कमजोर हुने अवस्था पल्मोनरी हाइपरटेन्सन हो ।
एक वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञका अनुसार यो यस्तो अवस्था हो जसमा रक्तनलीहरू बाक्लो र साँघुरो हुनुका साथै धमनीमा दबाब बढ्छ। त्यसैले, मुटुले फोक्सो र शरीरको बाँकी भागमा पर्याप्त रगत पम्प गर्न गाह्रो हुन्छ। यदि मुटुले पल्मोनरी हाइपरटेन्सनको दबाब विरुद्ध लगातार रगत पम्प गरिरहन्छ भने, यो अन्ततः कमजोर हुन्छ र अन्ततः हृदय विफलतातर्फ जान्छ।
पल्मोनरी हाइपरटेन्सन भएका व्यक्तिलाई सामान्यतया थकान हुन्छ र कडा काम वा व्यायाम गर्न गाह्रो हुन्छ। यसको लक्षण :
१. छातीमा दबाब महसुस,
२. लगातार लामो समयसम्म खोकी लाग्नु,
३. श्वास फेर्न गाह्रो हुनु र मुटुको गतिमा भिन्नता आउनु,
४-खुट्टा, पैताला वा पेट सुन्निने,
पल्मोनरी हाइपरटेन्सनको विकासको मुख्य कारण फोक्सोको धमनीका भित्ताहरु बाक्लो हुनु ,मोटो हुनु हो। जसले रक्तप्रवाहलाई रोक्छ र धमनीहरूमा दबाब बढ्छ। पल्मोनरी उच्च रक्तचापको कारण हुने अन्य अवस्था/कारणहरू जस्तै उच्च रक्तचाप, मुटुको भल्भ (भल्भ) दोष र अन्य अवस्थाहरू हुन् ।
बढ्दो उमेरसँगैउच्च रक्तचापको जोखिम बढ्न सक्छ। यो रोग प्रायः ३० देखि ६० वर्ष उमेर समूहका मानिसहरूमा भेटिन्छ। यद्यपि, इडियोपैथिक PAH युवा वयस्कहरूमा अधिक सामान्य छ।
चिकित्सकहरूले सामान्यतया मुटु र फोक्सोको शारीरिक परीक्षण गर्छन्। पारिवारिक इतिहास र औषधी इतिहास सहित एक व्यक्तिको स्वास्थ्य इतिहास पत्ता लगाउछन्। यदि शारीरिक परीक्षणमा पल्मोनरी हाइपरटेन्सन शंकास्पद छ भने, डाक्टरले थप सटीक परीक्षणहरू लेख्न सक्छन्। तिनीहरु यस प्रकार छन्:
१. छातीको एक्स-रे।
२. इकोकार्डियोग्राम ग्राम
३. पुल्मोनरी हाइपरटेन्सनको धमनीहरूमा रक्तस्राव मापन गर्न दाहिने मुटुको क्याथेटेराइजेशन
द हेल्थ साइटबाट
क्याटेगोरी : टिप्स, सर्ने/नसर्ने रोग
भिटामिन डीको कमीले पनि कम्मर दुख्छ, जान्नुहोस् यसका अन्य लक्षणहरु
क्यान्सरको जोखिम कम गर्ने सुपरफुड
मुटु स्वास्थ्यका लागि योग
चाहेर पनि धुम्रपान छाड्न सक्नुहुन्न ? यी तीन योगासनले गर्छ…
मुटु रोगको सुरुवाती लक्षण